Hogaamiyihii Maafiyada Taliyaaniga” Tutu Monster’” oo Geeiyooday(Aqriso faafaahin) | Xaqiiqonews
Hogaamiyihii Maafiyada Taliyaaniga” Tutu Monster'” oo Geeiyooday(Aqriso faafaahin)
Hogaamiyaha Maafiyada Taliyaanka Tutu Monester oo ahaa mid ka mid ahaa hogaamiyaasha Caalamka kuwa ugu sharta badnaa ayaa geeriyooday isaga oo jira da,da 87 sano maalintii khamiista aheyd ee la soo dhaafay.
Tutu oo sidoo kale marmarka qaar loogu yeero magaca ah “bahalka” ama “hogaamiyaha hogaamiyaasha” ayaa ka mid ah mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu sumcadda xumaa ee soo mara caalamka sanadihii sideedameyada iyo sagaashameeyada ee qarnigii 20,aad ee la soo dhaafay.
Tutu ayaa lagu eedeeyaa in uu mas,uul ka ahaa dilka kumanaan caruur,haween, askar iyo sidoo kale Siyaasiin intii lagu guda jiray intii uu madaxa ka ahaa kooxda maafiyada taliyaaniga.
Tutu ayaa la xanuunsanaa maalmihii danbe xanuunka kansarka iyo cudurada qalbiga iyadoo maxakmadna ay diiday in la sii daayo Tutu oo xabsiile ahaa ka dib markii la codsaday waxaa loogu yeero “dhimasho sharfeed”(in qofka xabsiile ah ee xanuunsan xabsiga laga sii daayo si uu u dhinta isaga oo aan xabsiga ku jirin).
Tutu ayaa dhinta isagoo ah aabaha afar caruur ah waxaana qoyskiisa loo ogaalday in ay sagooyitaan meydkiisa .